Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Sare - Tayada Soosaarayaasha Mashiinka Mashiinka Mashiinka, Oo Lagu Sameeyay Shiinaha - Dongguan Tuoyuan qiray Makiinado Co. LTD.
Mashiinka axdi qarameedka CNC
Mashiinka lathe CNC
CNC afar mashiinka dhidibka
Decameter CNC warshad gantry
Mashiinka maaskaro wajiga
Mashiinka dunta dhegta maaskaro
Qalabka mashiinka maaskaro
Maqas mashiinka dunta dhegta ah
Mashiinka maaskarada diyaaradda ilkuhu wuu dhintaa
Suunka rarka mashiinka maaskaro
Madaxa wax shiideysa
Hoyga > Alaabada > Qalabka mashiinka > Mashiinka axdi qarameedka CNC
Mashiinka maaskarada loo yaqaan 'Planar mask' ee loogu talagalay carruurta ilig alxanka u dhinta
CNC afar qaybood oo mashiinka birta ah
Farsamaynta birta ahama ee CNC
Mashiinka axdi qarameedka polyurethane mashiinka
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC
TUOYUAN waxay u taagan tahay waxqabadka sare ee lagu sameeyay soo saaraha Shiinaha ee aagga weyn ee mashiinka CNC. Qaybaha mashiinnada waaweyn ee ka shaqeeya 6 mitir illaa 17 mitir. TUOYUAN EE GANTA weyn ee CNC qaabdhismeedka qaabdhismeedka iyo kuleylka kuleylka ayaa u oggolaanaya farsameynta qaybo ballaaran iyadoo la ilaalinayo dhaqdhaqaaqa sare iyo ka saarista qashinka. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono alaab-qeybiye weyn oo weyn oo aad u ballaaran oo laga sameeyay Shiinaha.
Akhri wax dheeraad ah U dir Jawaab More
Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC processing PEEK
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka wax lagu qoro
Mashiinka axdi qarameedka CNC ee aluminium ka shaqeynaya
Tuoyuan waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Mashiinka axdi qarameedka CNC soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad ka iibsato tayo sare Mashiinka axdi qarameedka CNC keydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.
Cinwaanka: Xinguchung Warshadaha Warshadaha, Xinguchung Community, Wanjiang Street, magaalada Dongguan
Weydiimaha ku saabsan wax soo saarka ama pricelist, fadlan ka tago aad email noogu iyo waxaan la xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood. Waxaan leenahay farsameynta gong-ka kumbuyuutarka ee CNC, Mashiinka gawaarida, madaxa xagasha, mashiinka maaskaro wajiga, afar mashiin oo afar gees ah oo leh CE.
Shuruudaha farsamada ee ka shaqeynta qalabka iyo qaybaha2020/11/25
Nidaamka habeynta qaybaha waa habka tooska loogu beddelayo muuqaalka alaabta ceyriinka ah si looga dhigo badeecado nus dhammaad ah ama dhammaaday. Nidaamkan waxaa loo yaqaan habka farsamada.
Sidee loo ilaaliyaa mashiinka wax lagu shiido?2020/11/25
Kahor hawlgelinta qalabka mashiinka, waxaa lagama maarmaan ah in la aqoonsado in heerka saliidda siman ee dunmiiqa, tareenka hagaha iyo qaybaha kale ay buuxinayaan shuruudaha, iyo haddii cadaadiska hawadu uu buuxiyo shuruudaha. Sariirta mashiinka waxaa loo isticmaali karaa oo keliya ka dib marka la aqoonsado u hogaansanaanta shuruudaha. Oo mashiinku ha shaqeeyo 3 daqiiqo. Hubi in qalabka mashiinku aanu caadi ahayn iyo in kale.
Right Copyright 2020-2021 Dongguan Tuoyuan qiray Makiinado Co., Ltd.